By helitaanka web site this, waxaad ogolaaneysaa in aad raacdo kuwaas Shuruudaha web site iyo Shuruudaha Isticmaalka, dhamaan sharciyada iyo xeerarka, iyo isku raaceen in adigu aad masuul ka waafaqsanaanta qaanuunka maxaliga ah lagu dabaqi karo. Haddii aadan ku raacsanayn mid ka mid ah shuruudahan, aad waxaa ka mamnuuc ah isticmaalka ama helitaanka this site. Qalabka ku jira web site waxaa ilaaliya sharciga copyright iyo astaamaha lagu dabaqi.
2. Isticmaal License
Waxa loo fasaxay in si ku meel gaar download hal nuqul ka mid ah waxyaabaha ay (macluumaad ama software) web site Graphic Security Systems Corporation ee shakhsiga ah, daawashada aan ganacsi kala guur ah oo keliya. Tani waa deeq ah ee liisanka, ma kala iibsiga ah horyaalka, iyo shati u qabo waxaa laga yaabaa inaadan:
wax ka beddelo ama nuqul qalabka la;
adeegsato agab ujeeddo kasta oo ganacsi, ama wixii bandhigay dadweynaha (ganacsiga ama aan ganacsiga ahayn);
isku dayaan in ay kala hufto ama dib u software kasta oo ku jira goobta internetka ee Graphic Security Systems Corporation ee;
saarto copyright kasta ama xusidan kale lahaansho qalabka ay ka; ama
wareejiyo qalabka si ay qof kale ama “muraayad” qalabka ay ku server kasta oo kale.
Liisanka Tani waxay si toos ah joojin doonaan haddii aad xad-gudbin xayiraad kuwaas oo lagu joojin kartaa Graphic Security Systems Corporation waqti kasta. Marka joojinaysaa daawashada qalabkan ama la joojiyo oo shati this, waa in aad wada baabbi'iyo qalab kasta oo lagala soo bixi in aad hantida haddii in elektaroonik ama daabacay qaab.
The qalabka on web site Graphic Security Systems Corporation ayaa la siiyaa “sida uu yahay”. Graphic Security Systems Corporation ka dhigaysa damaanad lahayn, muujiyeen ama si dadban, oo halkan ku qaadi mayo oo ay masaxdaa dhan damaanad kale, oo ay ku jiraan xad la'aan, damaanad ama shuruudaha merchantability maldahan, ku haboonaanta ujeeddo gaar ah, ama aan mutaysan ee hantida aqooneed ama xadgudub kale ee xuquuqda. Dheeraad ah, Graphic Security Systems Corporation ma dammaanad ama wax Wakiilada saabsan saxnimada, natiijooyinka ka dhici kara, ama isku hallayn karo isticmaalka qalabkan ku saabsan web site Internet ay ama la xiriira qalabka sida ama wax goobaha lala in this site haddii kale.
Haddii ay dhacdo ma Graphic Security Systems Corporation ama meelaha alaabooyinka ay noqonayso wixii magdhow u noqon doonaan (lugu daro, xad la'aan, magdhow khasaaraha xogta ama macaash, ama ay sabab u tahay kala go 'ganacsiga,) ka soo shaac baxa adeegsiga ama aan awoodin in ay isticmaalaan qalabka ku saabsan goobta Internet Graphic Security Systems Corporation ee, xataa haddii Graphic Security Systems Corporation ama Graphic Security Systems Corporation wakiilka idman ayaa la ogeysiiyaa af ama qoraal ah suurogalka dhaawac sida. Sababtoo ah maamulada qaar hana u oggolaan in xadeyn ku saabsan fasaxyada, ama xadeyn ah liability waxyeelooyinka ka dhasha ama dhaca ah, xadeyntuna laga yaabaa in aanay adiga ku khusayn.
5. Dib-iyo Errata
Qalabka muuqashada on web site Graphic Security Systems Corporation ayaa ka mid noqon kara farsamo, typographical, ama qalad sawiro. Graphic Security Systems Corporation ma ballanqaadayso in mid ka mid ah waxyaabaha uu soo web site waa sax, complete, ama hadda. Graphic Security Systems Corporation laga yaabaa in isbedel ku qalabka ku jira ay web site sameeyaan waqti kasta ogeysiis la'aan. Graphic Security Systems Corporation ma, Si kastaba ha ahaatee, ka go'an wax kasta oo ay u cusboonaysiiyaan qalabka la.
Graphic Security Systems Corporation aan dib u eegis dhan oo ka mid ah goobaha ku xiran web site Internet ay oo mas'uul kama aha waxyaabaha uu goobta wax lala sida. Darista of link kasta oo ma tilmaamayso ayidaad by Graphic Security Systems Corporation of goobta. Isticmaalka kasta oo sida lala web site waa halis ku user ee u gaarka ah.
Graphic Security Systems Corporation dib ugu dhici karta in marka la eego isticmaalka ee ay web site waqti kasta ogeysiis la'aan. Adiga oo isticmaalaya web site kan waxaad ogolaaneysaa inaad ku xidhnaan by version ka dibna hadda oo ka mid ah xeerarka iyo shuruudaha Isticmaal.
8. Law maamulka
Dalab kasta oo la xiriira web site Graphic Security Systems Corporation ayaa waxaa xukumaya oo sharciyada Gobolka Florida iyada oon loo eegin in ay colaadaha ka mid ah qodobbada sharciga.